भोजपुरी चलचित्र गर्दा भनेजस्तो दाम पाउदैनन् नेपाली कलकारहरु हेर्नुहोस् ! हेपेरै दिन्छ यस्तो पारिश्रमिक - Samachar PatiSamachar Pati
भोजपुरी चलचित्र गर्दा भनेजस्तो दाम पाउदैनन् नेपाली कलकारहरु हेर्नुहोस् ! हेपेरै दिन्छ यस्तो पारिश्रमिक
हलिउड , बलिउड होस् या नेपाली सिनेनगरी अथवा होस् कुनै पनि क्षेत्र जहाँ पनि काम गरेपछी पैसा कै कुरा आउछ अग्र पंतिमा । तर सबैभन्दा चर्चा हुन्छ चलचित्र क्षेत्रको । चलचित्र गर्दा कस्ले कती पारिश्रमिक लियो ? त्यो धेरैको चासो बनिदिन्छ । यस्तैमा आज हलिउड , बलिउड वा नेपाली सिनेको कुरा हैन भोजपुरी चलचित्रकर्मी कस्ले कती पारिश्रमिक् लिन्छ त्यो बताउदै छौ ।
खास गरी तराईको जिल्ला वा भारको नाका को क्षेत्र होस् या बिहार ? प्राय सबै भन्दा बढी चल्ने चलचित्र हो भोजपुरी । जस मध्य केही चलेका कलाकारअको पारिश्रमिक् कती होला त ? अनुमान गर्नु भएको छ ? यसै सिमाभित्र रविकिशन, निरहुआ, पवन सिंहका साथमा नेपाली हिरो विराज भट्टसमेत समेटिएका छन् । सञ्चारमाध्यमले उनीहरूले लिने गरेको पारिश्रमिक उल्लेख गरेको छ ।
विराजले नेपाली मिडियालाई आफूले प्रतिफिल्म १० लाख भारु पारिश्रमिक लिने गरेको दाबी गर्दै आएका छन् । तर भारतीय अनलाइन दैनिक भास्करका अनुसार विराज भट्टको पारिशमिक कती भनी सार्वजनिक गरिदिएको छ । नेपाली अभिनेता विराज भट्ट भोजपुरी चर्चित स्टारमा परेका छन् । नेपाली र भोजपुरी चलचित्रका स्टार भएको उल्लेख गर्दै एक्सन हिरोका रूपमा व्याख्या गरेको छ । विराजले ‘जाबाज’, ‘जिगरवाला’, ‘प्यार करेला हिम्मत चाही’, ‘पियवा वडा सतावेला’, ‘विराज तडिपार’, ‘रंग दे प्यार के रंग दे’, ‘त्रिशूल’लगायत फिल्ममा अभिनय गरेका छन् । उनले एउटा भोजपुरी चलचित्रमा अभिनय गरेबापत ३ लाख भारू पारिश्रमिक लिने गरेको उल्लेख छ ।
रविकिसन बलिउडमा पनि चिनिन्छन् । बलिउडका थुप्रै फिल्ममा अभिनय गरेका रवि भोजपुरी फिल्मका सुपरस्टार हुन् । उनी अभिनयको बलले सफलता हासिल गरेका उनी अहिले एउटा भोजपुरी चलचित्र अभिनय गरेको ५० लाख भारु पारिश्रमिक लिने गर्छन् ।
पवन सिंह पनि भोजपुरी चलचित्रका सुपरस्टार हुन् । उनले अभिनय गरेबापत ४० देखि ४५ साल भारुसम्म पारिश्रमिक लिन्छन् । भोजपुरी चलचित्र उद्योगमा पवनको बडीको निकै चर्चा हुने गर्दछ । उनलाई भोजपुरी चलचित्रका सलमान खान भन्ने गरिएको छ ।
खेसारीलाल भोजपुरी फिल्मका अर्का स्टार हुन् । सन् १९८६ मा बिहारमा जन्मिएका खेसारीलाई शत्रुघ्न यादवको नामले पनि चिनिन्छ । उनले हाल एउटा फिल्ममा अभिनय गरेबापत ४० लाख भारु लिने गरेका छन् ।
दिनेशलाल यादवलाई निरहुआको नामले बढी चिन्ने गरिन्छ । दिनेशलाल एउटा चलचित्रमा अभिनय गरेबापत ३५ लाख भारु र केही प्रतिशत सेयर लिने गर्दछन् ।
दिनेशलाल यादवका प्रवेशलाल निरहुआका कान्छा भाइ हुन् । प्रवेशलाल एउटा चलचित्रमा अभिनय गरेबापत १० लाख भारु पारिश्रमिक लिने गर्दछन् ।
यश भोजपुरी चलचित्रका चल्तीको हिरोमा पर्छन् । उनले ‘दिलदार सावरिया’ फिल्मबाट डेब्यु गरेका हुन् । उनी हाल एउटा चलचित्रमा अभिनय गरेबापत ७ लाख भारु पारिश्रमिक लिन्छन् ।
राकेश पनि पहिला गायक थिए । सन् १९८७ मा जन्मिएका राकेशले ‘प्रेम दिवानी’ चलचित्रबाट हिरोका रूपमा डेब्यु गरेका हुन् । उनले प्रतिफिल्म ४ लाख भारु पारिश्रमिक लिन्छन् । उनले ‘दिवानगी हदसे’, ‘हरिओम हरि’लगायत फिल्ममा अभिनय गरेका छन् ।
बुहारी त पराइ थिइ, छोरा पनि पराइ होला भनेर मैले सोचेकी पनि थिइन [पुरा भिडियोमा हेर्नुहोस ]